Xirmooyinka Dhabarka Dambe, Jilibka ku duub Baakadaha barafka, sharaabaadyada Daaweynta Qabow - Huanyi
Waxaa la aasaasay 2012
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. waa warshad tiknoolajiyad cusub. Shirkadda waxaa ka go'an in ay horumariso alaabada baakada jel ee loogu talagalay quruxda shaqsiyadeed / caafimaad iyo caafimaad / isboorti / daryeel maalinle ah oo dejiya kuleylka iyo qabowga laga bilaabo sanadka 2012. Waxaan bixinnaa nasasho, jimicsi jireed iyo gargaarka degdegga ah ee nolosha, Alaabada waa shahaado oo leh SGS, FDA, CE, REACH, AZO, PROP65, warshad leh hanti dhowrka BSCI, waxaan leenahay khibrado iskaashi la sameeyay LIDL, ALDI, Wal-mart iyo Disney.
Jiangsu Huanyi Industrial takhasusay kulul iyo qabow berrinka duurka baraf duudduuban sannado badan, waxaan leenahay waayo-aragnimo badan oo loo habeeyo fikirkaaga dhabta ah, ka caawi in la abuuro wax soo saarka u gaar ah aad hab xirmo ku habboon, wax soo saarka oo dhan waa 100% baaritaanka cadaadiska iyo 100% track nidaamka wax soo saarka. Dhamaan iibiyeyaasheena waa injineer xirfad leh, waad kala hadli kartaa wixii fikrad ah ama adeega iibka kadib, hal qof ayaa ugu yaqaana inta badan, markaa saaxiibo nala noqo, ku raaxeyso adeegeena hada.
Hordhac L w Miisaanka Miisaanka Miisaanka M 40cm 30cn 1.0cm 700g L 50cm 40cm 1.0cm 1100g LL 60cm 50cm 1.0cm 1800g XL 90cm 50cm 1.0cm 2000g Hoos u dhigida aragtida heerkulka sariirta qaboojinta. Gel polymer qaboojiyaha wuxuu la mid yahay gel polymer-ka qaboojiyaha koollada loogu talagalay dhallaanka. Polymer-ka leh biyo aad u sarreeya wuxuu si hufan uga soo nuugaa kuleylka jirka bini'aadamka ilaa sariirta wuxuuna ku tiirsan yahay ku xirnaanta iyo faafidda gel polymer si loo kululeeyo si loo sameeyo wanaag kuleylka is weydaarsiga iyo wareejinta ...
Hordhac PORTABLE & CONANENENT - Gacanta qaboojiyaha khamrigu waa mid fudud, is haysta, oo habboon. Si fudud ugu qaad goobta dalxiiska, agagaarka barkadda, kaamam, ama dhacdooyin kasta si aad ugu raaxaysato oo ugu nasato cabitaannada la qaboojiyey xitaa iyada oo aan lahayn baaldi baraf ah. SAHAL IN LA ISTICMAALO-Ku rid qaboojiyaha dhalada qaboojiyaha qaboojiyaha ilaa 2 saacadood, oo hoos ugu siib gacanta si aad u qaboojiso cabbitaannada si dhakhso leh u hayso qaboojiyaha saacadaha. Ku habboon in lagu isticmaalo khamriga, biirka, Champagne, iwm Cabbirka badeecadda: 6.1 x 9.25 Magaca Inch: Bacda qaboojiyaha khamriga, ...
Hordhac Cadaadis kulul iyo qabow, dib loo isticmaali karo, Biyo la'aan, Qiyaas aan sun ahayn: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm Miisaanka: 120g, 130g, 160g, 180g Codsiga loo isticmaalay daaweynta kulul iyo qabow waxay ka caawineysaa inay yareyso indhaha oo bararay, indho wareersan, sanka raaxo la'aan, dhanjafka, waxay bixisaa gargaar aan daawo lahayn. Waxaa loo isticmaali karaa sida maaskaro indha-ka-qaboojiyaha iftiinka heerkulka qolka. Waxay u muuqataa sida maaskaro, runtiina waxay u isticmaali kartaa inay noqoto indho-qaboojiyaha indhaha, laakiin ha yareynin male-awaalkaaga. Badeecadani waa tan ugu weyn ee lagu cadaadiyo kulul ama comp ...
Hordhac Daaweynta kulul iyo qabow - Carruurtani waxay xirxiraan xirmooyinka isku beddela cadaadis diiran iyo qabow, way deg deg badan yihiin barafowga iyo fududahay in la isticmaalo. Ku rid barafka barafka biyaha kulul ama barafeeyaha, waxay si fudud isugu beddeli karaan heerkulka waxayna hanan doonaan kuleylka ama qabowga muddo dheer oo ay la socdaan duub jilicsan oo casaan ah. Daaweynta qabowgu waxay kaa caawineysaa gaabinta socodka dhiigga, waxay kaa yareysaa dhiig-baxa iyo bararka. Daaweynta kuleylka / kulul waxay ka caawisaa dardargelinta socodka dhiigga iyo jarista bogsashada, si dhakhso leh uga soo kabashada inju ...
Hordhac CELINTA XANUUNKA XANUUNKA BUKAANKA: Bartilmaameedka labada dhinac hore iyo xagga dambe ee jilibka oo leh isku-xoqid la hagaajin karo iyo daaweynta kulul ama qabow, barafka jilibka qabow wuxuu si wax ku ool ah u yareeyaa bararka, xanuunka iyo caabuqa muruqyada daal, dhaawac ama qalliin. Jilbaha jilicsan ee jilicsan ayaa sidoo kale bixiya gargaar raaxo leh oo loogu talagalay murgacashada iyo muruqyada, ACL, arthritis, dhaawacyada isboortiga, qalliinka iyo waxyaabo kale oo badan. CAAFIMAAD KULUL AMA QABOW: Waxaa ku jira xirmooyinka jel ee laga saari karo ee loogu talagalay daaweynta kulul ama qabow. Xirmo kasta si fudud ayuu ugu boodayaa ...
Hordhac Qabow wuxuu hoos u dhigi karaa socodka dhiigga, daaweynta qabow wuxuu gaabiyaa wareegga dhiigga, wuxuu yareeyaa caabuqa, murqaha oo adkaada iyo xanuunka. Raac nidaamka RICE dhaawaca kadib: Naso: Naso oo iska ilaali inaad isticmaasho aagga dhaawaca. Baraf: Baraf aagga dhaawacmay sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, tani waxay gacan ka geysaneysaa yareynta caabuqa, dhiig baxa iyo nabarrada isla markaaba. Isku-soo-ururi: Ku duub faashad, inta badan ku hay faashad jilicsan xirmooyinka gargaarka degdegga ah. Sare u qaad: Ku hay dhaawaca ka sarreeya wadnahaaga si aad u yarayso bararka. Maxaad Noo Dooranaysaa? 1 ...
Maxaan u dooran karnaa xirmo baraf ah si loo yareeyo xanuunka? Haddii aad xanuun dhabarka ah ka haysato baaskiil wadista, ama aad ka dareemeysid barar qalliin, kaliya u isticmaal xirmadan barafka qoorta iyo garbaha xanuun joojinta. Magaca badeecada: Gel Pad Ice Pack oo loogu talagalay Cabbirka Heerka: 22 * ​​7.5 INCHES Miisaanka: 800G Logo la habeeyay iyo xirmo Shahaadada: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI Xirmooyinka jelkan ayaa ah kuwo is-bedbeddelaya ka dib markii la qaboojiyay, sidaa darteed waxaad ku dhejin kartaa hareerahaaga jilibka, garabka, iyo qoorta. Dhowr saacadood ka dib qaboojiyaha, xirmada barafka ee dhaawacyada g ...
Hordhac Waxyaabaha: dharka satin dharka isku dhafka ah ee isku dhafan PVC Cabbirka: 47cm dhexroor, 600g Midab: casaan joogto ah, midab waa la habeyn karaa haddii tirada ay ka badan tahay 2000pcs Isticmaalka: Ka dib marka la shaamyeeyo, si siman u mari kareemka dubista, xir xiro furka qubeyska la tuuri karo, kunaleyli dabool daboolka kuleylka dhexdhexaadka ah ee microwave illaa 2-3 daqiiqo. Marka heerkulku yahay qiyaastii 35-45 digrii, xidho illaa 15 daqiiqo. Ku habboon perm, daryeelka dheeha ka dib, iyo dayactirka tayada timaha maalin kasta. Maxaad Noo Dooranaysaa? ...